‘साइकल मन्त्री’ लालबाबुको काठमाण्डौ र विराटनगरमा घरजग्गा, आखिर कसरी भयो श्रीमतीकै नाममा यति धेरै सम्पत्ति ? – Classic Khabar
May 29, 2021 337
केपी ओलीभन्दा राधिका धनी! तर, श्रीमतीभन्दा गरीव छन् प्रधानमन्त्री ओली। यसैबीच, ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूले गतमहिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीकी श्रीमतीको नाम सम्पत्ति छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा जग्गा जमीन छैन। उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार तलबभत्ता वापतको ४२ लाख रुपैयाँ एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।